श्रीमानसंग सुतेकी थिईन्, आधारातमा कसैले शरीर खेलायो, श्रीमान सम्झेर आँखा खोल्दा होसै उड्यो ! « Onlinetvnepal.com
श्रीमानसंग सुतेकी थिईन्, आधारातमा कसैले शरीर खेलायो, श्रीमान सम्झेर आँखा खोल्दा होसै उड्यो !
Published : 8 February, 2019 12:44 pm
एक व्यक्ति मध्यरातमा एक घरमा छिरे । ती युवक खराब नियतसहित घरभित्र पसेका थिए । भित्र गएर हेर्दा महिला पतिसँग सुतिरहेकी थिइन् । यी युवकले महिलासँग जानुभन्दा पहिले किचनमा गए । त्यहाँ दूध र मलाई थियो । उनले पहिले दूध र मलाई खाए । त्यसपछि बल्ल उनी महिलाको नजिक गए । जहाँ महिला पतिसँग सुतिरहेकी थिइन् ।
सुतिरहेकी महिलालाई राती करिब ३ बजे आफ्नो खुट्टा कसैले चलाएजस्तो लाग्यो । उनलाई लाग्यो उनका पतिले उनको खुट्टा चलाउँदैछन् । महिला गहिरो निद्रामा थिइन् तर उनलाई थाहा भइसकेको थियो कि उनको खुट्टा कसैले चलाइरहेको छ ।
एक्कासी ती युवकले महिलाको शरीरभरी चलाउन लागे । महिलाले त्यसपछि भने आँखा खोलिन् । आँखा खुल्नासाथ महिलाको होस उड्यो । किनकि महिलाले जसलाई आफ्नो पति सम्झेकी थिइन् त्यो त अर्कै व्यक्ति थियो ।
आत्तिएर महिलाले जोडले चिच्याइन् । पत्नी चिच्याएपछि पतिको पनि निद्रा खुल्यो । पतिले युवकलाई सामत्न खोज्दा युवक भागे । तर भाग्दै गरेका युवकलाई अन्ततः पतिले समाते । उनले युवकलाई पुलिसमा बुझाइदिए । पुलिसले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी कारवाही अगाडि बढाएको छ ।